भाइटीकाको दिन जिम्मेवारीबोध हुने गर्छ – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक १२ गते ११:०१
डा. रमेशसिंह भण्डारी कलेजोरोग विशेषज्ञ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल
तिहार मनाउन पुर्ख्यौली घर नगएको धरै वर्ष वित्तिसकेको छ । डाक्टरी पेसामा काम छोडेर हिँड्न सकिँदैन । बाल्यकालमा तिहार कहिले आउला भनेर दिन गनेर बसिन्थ्यो, रमाइलोका लागि । बाल्यकालमा कुनै जिम्मेवारी आफूमा नभए पनि होला, रमाइलोमा मन धेरै केन्द्रित हुने गर्थ्यो । आजभोलि तिहारमा देउसी–भौलो खेलेको देख्दा पनि बाल्यकालका ती सम्झना मेरो मानसपटलमा आइरहन्छन् ।
अस्पतालमा चाडबाडमा कम्पेक्स केस आएका कारण पनि आफू तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । हाल हाम्रो टिमले शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपणमा ३ वटा सफलता पाइसकेको छ । प्रत्यारोपण गरिएका बिरामी अस्पतालमा रहेका कारण तिहारभरि अस्पतालमा उपलब्ध हुने गरी बस्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि वेला अस्पताल जानुपर्ने अवस्था आउँछ । यस वर्षको तिहारमा उपत्यकाबाहिर जाने योजना छैन । विगतका केही वर्ष परिवारसँग बसेर तिहार मनाउन पाएको थिएँ ।
अस्पतालमा व्यस्त हुने भएका कारण तिहारको समयमा धेरै समय दिन पाएको छैन, तर यसमा कुनै दुःख पनि लागेको छैन । बिरामीको सेवा गर्नु नै डाक्टरको कर्तव्य भएका कारण डाक्टरले बिरामीका लागि समय दिनु नै राम्रो हुन्छ । बिरामीको सेवाभन्दा ठूलो धर्म अरू के नै हुन सक्छ र !
तिहारका वेला पूर्ण रूपमा घरमै भने कहिल्यै बस्न पाएको छैन । चाडपर्वका वेला कम्प्लेक्स केस आउन सक्छन्, जुनसुकै वेला अस्पताल पुग्न सक्ने गरी बस्नुपर्ने हुन्छ ।
दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीच माया र सद्भावसँगै जिम्मेवारीबोध हुने तथा हिन्दू धर्मावलम्बीका हिसाबले पनि तिहारलाई विशेष महत्त्व दिएर मनाउँदै आएको छु । तर, यसपटक प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीका कारण तिहारभर जुनसुकै वेला अस्पतालमा उपलब्ध हुनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रायः पुर्ख्यौली घर जान पाएको छैन । तिहारमा सधैँजसो दिदी–बहिनी काठमाडौंमा आएर टीका लगाइदिनुहुन्छ । पहिला–पहिला साथीभाइसँग रमझम गरेर मनाइन्थ्यो भने आजकल जिम्मेवारी बढेको भएर पनि होला, मुस्किलले मिल्ने फुर्सदको समय घरपरिवारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । अन्य समयमा बिहान–बेलुकै दौडधुप हुने केटाकेटीलाई समय दिन नपाइने हुन्छ ।
तिहारमा खानपान अन्य वेलाभन्दा अलि विशेष भए पनि म त्यसअनुरूप केयरफुल पनि हुने गरेको छु । दैनिक रूपमा व्यायाम गर्ने समय निकाल्ने गरेको छु । तिहार मनाउने बहानामा घरबाहिर गएर बस्ने गरेको छैन ।
हिन्दू धर्मावलम्बीका हिसाबले पनि तिहारलाई विशेष रूपले मनाउने गरिन्छ । त्यसबाहेक पनि यो पर्वले दिदी–भाइबीचको सम्बन्धलाई कायम राख्ने गर्छ । तिहारमा दिदीभाइ भनेको विशेष सम्बधका हुन् भनेर सम्झने गरिन्छ । वर्षभरि मनमुटाब भए पनि तिहारमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीच एकअर्कामा माया तथा सद्भाव प्रकट हुने हुन्छ । तिहारमा भाइटीकाको दिन जिम्मेवारीबोध हुने हुन्छ ।
डा. रमेशसिंह भण्डारी